Madaxda Midowga Afrika oo doortay guddoomiye cusub – Balcad.com Teyteyleey
Madaxda Midowga Afrika oo doortay guddoomiye cusub
Wasiirka arimaha dibadda dalka Chad Moussa Faki Mahamat ayaa loo doortay guddoomiyaha midowga Afrika kadib doorasho maanta ka dhacday magaalada Addis Ababa oo ay ku shirsan yihiin hogaamiyeyaasha qaaradda Afrika.
Moussa Faki Mahamat, ayaa heley 38 cod, isagoo ka guuleystay wasiirka arimaha dibadda dalka Kenya Amina Maxamed oo wareegii u dambeeyay isla soo gaareen.
Ilaa shan murashax oo labo kamid ah We’ve got the best solution for your lasix purchase! Why? Just because you can buy it only for 0.35 USD with us! dumar yihiin ayaa ku tartamayay jagada ugu sareysa midowga Afrika.
Guddoomiyaha xilka ka degaysa oo ah gabadh ka soo jeeda Koofur Afrika Dr. Nkosazana Dlamini-Zuma, ayaa xafiiska joogi doonta lixda bil ee soo socota kadib markii madaxda midowga Afrika ay ku guuldareysteen in bishii Luulyo ay doortaan hogaanka cusub.
Shir madaxeedka midowga Afrika ayaa labada maalin ee soo aadan waxaa uu ka socon doonaa xarunta ururtooda Addis Ababa, ayagoo arimaha ay ka hadli doonaan ay kamid tahay dib ugu soo laabashada xubinnimadeeda ururka Midowga Afrika wadanka Morocco kadib markii ay ka maqneyn muddo ku dhow 30 sano.
Dalka Morocco, ayaa ururka Midowga Afrika ka baxday sanadkii 1984, kadib markii Midowga Afrika ay aqoonsadeen madax banaanida galbeedka Sahara, kaas oo Morocco ay sheegayso in qeyb uu ka yahay wadankeeda.
Midowga Afrika, ayaa waxaa ay taageereen in la mideeyo siyaasadda iyo dhaqaalaha 54 wadan ee qaaradda Afrika.
RW Ku-Xigeenka oo ka gudoomay Jaamacadda Carabt lacag gargaar ah+Sawiro